Flooded Yangon | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
May 11, 2007, 6:25 am
ပြောသံကြားတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်မထူးဆန်းသလိုပါပဲ .. ။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ အားလုံးက ခေတ်ပျက်နေတာ အဆိုးဆုံးတွေ တစ်ခုချင်းဆက်တိုက်ဖြစ်လာတာ အရေတောင်ထူချင်နေပြီ .. ။ ရန်ကုန်မှာ ရေကြီးနေတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ကျမ ၄တန်းတုန်းက ကျမဇာတိမြို့မှာ ကမ္ဘာပျက်မတတ် ရေကြီးခဲ့ပုံကို ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ် .. ။ အဲဒီအချိန် ရေကြီးခဲ့ပုံက ကျမ ဒီနေ့ထိ အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို မြင်တွေ့ခဲ့သလိုပါပဲ .. ။ သေလိုက်တဲ့ လူသေအလောင်းတွေဆိုတာ လူတွေအတွက် ငှက်ကလေး ကြက်ကလေးတွေ သေတဲ့အတိုင်းပဲ … ။ ရေလှောင်ကန်ပေါက်သွားပေလို့ပါပဲ .. ။ အဲဒီအချိန်က ဆည်တာတွေများ ကျိုးသွားခဲ့ရင် ဒီနေ့ လင်းလက်ဆိုတာ ရှိမှာတောင်မဟုတ်ခဲ့ဘူး .. ။
ရေကြီးပြီး လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ သတင်းတွေအမှောင်ချထားပြီး ရန်ကုန်ကလူတွေတောင် မသိခဲ့ကြဘူး .. ။ ကားလမ်းတွေပိတ်လို့ ကားသမားတွေပြန်ပြောတာလောက်ပဲ သိကြတော့ ပြန်ပြန်တွေးမိရင် ရင်သိပ်နာပါတယ်.. ။ အိမ်ခေါင်တွေထိရေတွေထိ ၊ တစ်မြို့လုံးရေပတ်လည်ဝိုင်းနေချိန်မှာ ဒုက္ခသည်များအတွက်ဆိုပြီး လာလှူတာတွေကို ဖြတ်ယူတဲ့အမှုတွေကလည်း တက်နေတော့ တကယ်ကို စိတ်ညစ်စရာသောကပင်လယ်ကြီးပါပဲ .. ။ ၀မ်းရောဂါတွေအဖြစ်များပြီး လူတွေ စားစရာမဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ခုပါပဲ။ စီးပွားတွေပျက် ၊ အိမ်တွေပျက်စီး ၊ ရောဂါနဲ့သေ …. ကပ်ဆိုးတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် .. ။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရေကြီးနေတာ လက်လုပ်လက်စားလူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို ဒုက္ခဆိုးပါပဲ .. ။ အခုလည်း ရန်ကုန်မှာ ရေကြီးနေတာ အားလုံး တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပါ … ။ ကျမ တခါတလေ စဉ်းစားတယ် .. ။ ဒါတွေကို မပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးလား .. ။ စိတ်ကူးတွေနဲ့ အသက်ပျောက်ကြတော့မှာလား .. ။ အစရှာမရတဲ့ ၀င်ကဘာလို ဖြစ်နေတာလား .. ။ အားလုံးကရော မသိသလို နေကြတော့မှာလား .. ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာထက် မိမိတတ်နိုင်တာလေးတွေ မလုပ်ဆောင်ကြတော့ဘူးလား .. ။ ဘာဖြစ်လို့များ မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်က ကျမတစ်သက်ထက်မက ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကတည်းက သက်ဆိုးရှည်နေပါလိမ့် .. ။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် လက်ညိုးထိုးမှုတွေထက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ဘာလို့များ မထွက်လာကြတာပါလိမ့် .. ။ ထူးချွန်သူတွေ ၊ ထက်မြက်သူတွေ ၊ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ အများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြင်ပက လူတွေထဲမှာမှ ဒါတွေကို အဆင်ပြေအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘူးလား .. ။
“ကိုယ်နဲ့တန်တဲ့အစိုးရကိုပဲရထားတယ်”လို့ ပြောရင်လည်း အားလုံးဝိုင်းရိုက်မယ့်ကိန်းပါပဲ .. ။ ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ အပြစ်တင်စရာ မရှိပေမယ့် ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုတော့ ကြိုဆိုအလိုရှိမိတယ် .. ။ စစ်အာဏာရှင်ခိုင်းစေသမျှကို ခေါင်းညိတ်ပြီး နောက်ကွယ်မှာ အတင်းပြောတဲ့လူတွေကိုတော့ တကယ်ရွံတယ် .. ။ မကျေနပ်ရင် ရှေ့တင်ဆန့်ကျင်ရဲရမှာပေါ့ .. ။ အစိုးရအမည်ခံပြီး သူခိုးဓါးပြလုပ်နေသူတွေစကားကို ဘာလို့များ နားထောင်နေကြတာပါလိမ့် .. ။
လူတွေရဲ့ အကြောက်တရား ပြင်းချက်ကတော့ တခါတလေ ကိုယ်တိုင်ပါစိတ်ဓါတ်ကျမိတယ် .. ။ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြောက်နေရင်တော့ မှောင်ရိပ်ထဲထိုင်ရင်တောင် ကြောက်ရမယ့်ကိန်းပါ .. ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကျေးရွာက အဖြစ်အပျက်တွေ ၊ အိမ်မဲ့ယာမဲ့လူတွေ ၊ အနာဂတ်မဲ့တဲ့ ကလေးတွေ … ဒီပုံရိပ်တွေမြင်ရင် မျက်ရည်ဝဲရပါတယ် .. ။ ကျမ အကုန်လုံးမကူညီနိုင်တဲ့အတွက်လည်း ရင်ထဲနာမိပါတယ် .. ။
ကျမ တစ်ခါတစ်လေ ကိုကို့ကိုပြောပြတယ် .. ။ “ကျမနားမှာ အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ မိဘနှစ်ပါး ၊ ဖြစ်ချင်တာကို ချက်ချင်းလုပ်ပေးတဲ့ ချစ်သူ … အကုန်ပြည့်စုံနေချိန်မှာ ကျမနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိမယ့် ဘ၀ပျက်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ၊ လမ်းဘေးက မိန်းကလေးတွေ .. သူတို့ကိုမြင်တိုင်း ကျမ တအားစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်”လို့ ပြောပြမိတယ် .. ။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံ တစ်ကယ်ကိုဖြစ်နေခဲ့ပြီ … ။ ခေတ်စပျက်ရင် ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ မိန်းမတွေ စတင်ဘ၀ပျက်ရတယ်ဆိုတာ အမှန်စင်စစ်ပါပဲ .. ။ ဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ရင်ကိုခွဲပြီး သူတို့အသဲနှလုံးတွေကို ထုတ်ကြည့်လိုက်ချင်မိတယ် .. ။
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း မညှာတာ ရက်စက်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာလူမျိုးကို ပထမပေးသင့်ပါတယ် .. ။ မြန်မာပြည်က ဒုက္ခရောက်တဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ ၊ ကျေးရွာတွေကို ကူညီမယ်ဆိုပြီး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး စင်ကာပူကမြန်မာတွေကို တစ်ယောက် ၂ ဒေါ်လာနှုန်းပဲ ကောက်အုန်း .. ။ စင်ကာပူမှာ မြန်မာလူမျိုးပေါင်း သိန်းဂဏန်းချီတော့မယ်ထင်ပါတယ် .. ။ လူဦးရေ ၆သောင်းရှိတယ်ဆိုရင် အားလုံးပေါင်း ၁သိန်း၂သောင်းရမှာပါ …. ။ ပျမ်းမျှ $ 100,000 ရရင်တောင် အများကြီး ကူညီလို့ရပါတယ် .. ။ ထမင်းတစ်ခါစားရင် အနိမ့်ဆုံး $ 2.50 ကျပါတယ် .. ။ ထမင်းတစ်ခါစားတောင် မရှိတဲ့ အလှူငွေထည့်ရမယ်ဆိုရင် လူတွေက လက်သိပ်တွန့်ပါတယ် .. ။ စေတနာ ၊ သဒ္ဓါတရား နည်းပါးကြပါတယ် .. ။ Night Club သွားပြီး အပျော်အပါးအတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၀၀ကို မနှမြောကြပါဘူး .. ။ ရှိုးပွဲတွေ သွားပြီး ဒေါ်လာ ၆၀ကစပြီး ဖြုန်းတီးရမယ်ဆို လက်သိပ်မြန်ပါတယ်. . ။ ကိုယ်ရှာသမျှထဲက ရွေးစေ့လောက် လှူရမယ်ဆို မေးမြန်းခြင်းတွေအာပေါက်အောင် မေးပြီး လက်က ပြန်ပြန်ရုတ်သွားတတ်ကြတယ် .. ။ မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံး စေတနာထက်သန်တယ်လို့ ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတာကို ကျမတော့ သိပ်မထောက်ခံချင်တော့ပါဘူး ..။ ကောင်းသူက နည်းနည်းလေးပါ .. ။
ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ဘို့တည်းကြည့်တဲ့ လူစားမျိုးတွေပဲ များပါတယ် .. ။ ဒီလိုလူတွေအများကြီးထဲက အများအတွက် အချိန်အား ၊ ငွေအား ၊ လူအင်အား အားလုံး ရင်းထားပြီး အမှန်တရားတစ်ခုအတွက် လုပ်ဆောင်နေသူကို ကျမဘ၀လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးထားတဲ့အတွက် အမြဲဂုဏ်ယူမိပါတယ် .. ။ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ဘဲ မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ထဲကနေ စာနာစိတ်အပြည့်နဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ “သူ့”ကို ကျမ လူချင်းမရင်းနှီးခင်ကတည်းက လေးစားပြီးသားပါ … ။ ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်တယ်လို့ အများပြောမှာ မလိုလားလို့ ကျမသိပ်မပြောခဲ့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ လေးစားစိတ်က ပိုတိုးလာမြဲပါ .. ။ သူသွားမယ့် ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ အားပေးမှုအပြည့်နဲ့ ကျမလိုက်လျှောက်မှာပါ.. ။ ကျမသိတဲ့အရာက နည်းနည်းလေးပါ .. ။ လက်သည်းခွံသာသာလောက်ပဲ အသိရှိသေးတဲ့ ကျမစိတ်ကူးတွေထဲမှာ “သူ့”ကြောင့် အသိအားတွေ ပိုတိုးလာခဲ့ရတယ် .. ။ ကျမ ရဲရင့်တယ်ဆိုတာ သူနဲ့ယှဉ်၇င် အသေးအမွှားပဲရှိပါသေးတယ် .. ။ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးကတစ်ဖက် ၊ အများအတွက်လုပ်နေတာကတစ်ဖက် ၊ ဒီကြားထဲ ကျမနဲ့ပတ်သတ်ရင် အကုန်ဂရုစိုက်ရတာက တစ်ဖက်နဲ့ သူ့ကို တစ်ခါတစ်လေ သနားမိပါတယ် .. 😀 ။
မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ဆရာတွေချည်း များနေတဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ နောက်ဆုံးအဖြေထွက်နှေးတာလည်း မမှားပါဘူး .. ။ ခေါင်းဆောင်တွေ များနေပြီး နောက်လိုက်မှ မရှိတာ .. ။ သူတစ်ပါးစိတ်ကူး ၊ အတွေး ၊ လုပ်ဆောင်မှုထက်စာရင် မိမိ စိတ်ကူးအတွေးတွေကို အများကလိုက်လုပ်တာကိုပဲ အလိုရှိတဲ့ လူစုတွေကြားမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အရမိနိုင်ဖို့ နည်းနည်းလှမ်းနေသလိုပါပဲ .. ။
“အများကြီးမလုပ်နိုင်ရင် မိမိလုပ်နိုင်သလောက်ကို စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ကူညီလုပ်ပေးလိုက်ပါ”လို့ ကိုကိုပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကျမ သဘောကျပါတယ် .. ။ လေတွေပေါ်မှာ ကုန်ဆုံးသွားတာထက် တကယ်လုပ်နိုင်တာကို လုပ်လိုက်တာက ပိုမြန်ပါတယ် .. ။ အတွေးတွေချည်း ရှိနေပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုနည်းနေရင်တော့ လိုချင်သောအရာဆိုတာ ဝေးသထက်ဝေးနေမှာပဲလေ .. ။ ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လောက်တော်တော် ၊ ဘယ်လောက်မှန်မှန် ၊ နအဖလူတွေရှေ့ရောက်ရင် အားလုံးက ကုပ်ကုပ်လေးတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံတွေကို ကျမ တော်တော်စိတ်ကုန်လှပါပြီ .. ။ ဘာလို့ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း မဖော်ထုတ်ကြတာလဲ .. ။
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း စကားစလိုက်တာနဲ့ “အေးအေးဆေးဆေးနေပါရစေ”ဆိုတဲ့ စကားသံတွေပဲ ပြန်ကြားရပါတယ် .. ။ အမှန်တကယ်က အဲဒီလိုပြောတာကိုက မှားနေတာပါ .. ။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်းသွားမှ အားလုံးက အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အိမ်ပြန်လမ်းတွေလှနေမှာပါ . ။။ မြန်မာပြည်မကောင်းသရွေ့ အားလုံးက အပြင်မှာပဲ လွင့်နေမှာပဲ .. ။ ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အင်ဂျင်နီယာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ပရိုဂရမ်မာတွေ ၊ အကောင့်သမားတွေ ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ အားလုံး ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ယခုပြည်ပမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး အိမ်နဲ့မကွာ မနေချင်ကြဘူးလား .. ။ အားလုံး နေချင်ကြမှာပါ .. ။ မိမိသာ မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာ ရှိနေပါစေ … ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြောက်တဲ့ သတ္တိမျိုးမရှိချင်ဘူးလား .. ။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ မိဘနှစ်ပါးက အလုပ်လုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုရင် တစ်အိမ်လုံးငတ်မှာပဲ .. ။ ဒီလိုပဲ …. မိမိပိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ဆိုတာ မိမိတို့အားလုံး လုပ်ရမှာပါပဲ ( ကျမစကားကြီးစကားကျယ် ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ထဲကစကားပါ )။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ဒေါ်စုတို့ တော်နေရုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ မရနိုင်ပါဘူး .. ။
မြန်မာပြည်ဆိုတာ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေ ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး .. ။ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ပိုင်ပါတယ် .. ။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ပြည်သူက တင်မြှောက်တဲ့ ၊ အစိုးရနေရာနဲ့ထိုက်တန်သူပဲ ဖြစ်ရမှာပါ .. ။ ကလေကချေက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရင် ပြည်သူအားလုံးလည်း ကလေကချေဖြစ်ကုန်မှာပါ .. ။ ပြည်ပမှာနေတဲ့သူတွေ ဘ၀က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်က ဒုက္ခရောက်နေသူတွေထက်စာရင် ပိုတော်ပါသေးတယ် .. ။ အဲဒီလိုလူတွေက အမိမြေကို ကျောမခိုင်းသွားသင့်ပါဘူး .. ။ တစ်လက်စတည်း ပြောလိုတာက ဘယ်နိုင်ငံသားကို ခံယူထားသည်ဖြစ်စေ ၊ မြန်မာလူမျိုးက မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ပြောင်းလဲမှုက မြန်မာပြည်အတွက် ပိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ .. ။ မြန်မာပြည်အတွက် လုပ်ပေးနိုင်သူတွေကို ထောင်ထဲမှာ မမြင်ချင်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းတဲ့သူများကို ကျမ အားပေးပါတယ် .. ။ တစ်ဖက်ကို ဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အားရှိဖို့လိုပါတယ် .. ။
မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် လုပ်နိုင်တာလေးတွေ ရှိနေပါတယ် .. ။ အစိုးရနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ခရီးစဉ်တွေ ၊ စီးပွားရေးတွေ ဘာဆိုဘာမှ အားမပေးနဲ့ .. ။ အနည်းဆုံး မြန်မာပြည်ပြန်ရင်တောင် အစိုးရဖွင့်ထားတဲ့ ခရီးစဉ် MAI လိုလေကြောင်းကို အားမပေးကြနဲ့ .. ။ ဟိုတစ်ခါ အစိုးရနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေ ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကို သပိတ်မှောက်သလိုမျိုးပေါ့။ ပြည်ပက မြန်မာတွေဆိုရင် မတရားအခွန်ပေးရတယ် .. ။ ဥပမာ စင်ကာပူမှာ နှစ်ထပ်ကွမ်းအခွန်မဆောင်ရရေး စာချုပ်ကြီးကို သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ချုပ်ထားပြီး မြန်မာတွေကို မတရားအခွန်ကောက်တယ် .. ။ ဒါဆိုရင် သိပ်ဘောင်ကျော်သွားပြီ .. ။ သူတို့ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ကိုကိုင်ပြီး အားလုံးက အမှန်တရားကို ဥပဒေနဲ့အညီတောင်းဆိုရဲရမယ် … ။ ပါဝင်ရဲရမယ် .. ။ ကူညီနိုင်ရမယ် .. ။ အားပေးထောက်ခံနိုင်ရမယ် .. ။ ဒါဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးထဲက တစ်စုကို ကူညီခြင်းပဲ … ။
”ခြေလှမ်းအကြီး မလျှောက်လှမ်းနိုင်ရင် ခြေလှမ်းသေးကို စလျှောက်ကြပါ”
လင်းလက်.. မင်းပြောတာ အမှန်တွေပါပဲ..
တကယ်တော့ မြန်မာတွေ အားလုံး..ဟာ.. မြန်မာနိုင်ငံအတွက်..
မစွန့် လွတ်ရဲ့ ကြတော့ဘူ… “ကိုယ်နဲ့ တန်တဲ့ အစိုးရ ပဲ ရတယ် “
ဆိုတာ.. အမှန်ပဲ.အားနာစရာမရှိပါဘူး..မင်း ကိုကိုကတော့ မင်း
ပြောပုံအတိုင်းဆိုလေးစားဖို့ ကောင်းနေပြီ :).. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Comment by ah nai May 11, 2007 @ 5:18 pm
ကျေးဇူးပါပဲ Ah Nai. ကိုယ်တွေဘက်က အားနည်းချက်တွေများနေလို့ စစ်အာဏာရှင် သက်ဆိုးရှည်နေတာပါ။ လင်းလက်ရဲ့ ကိုကိုကတော့ လက်တွေ့သမားဆိုတော့ သူက လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်လိုက်တာကို ပိုနှစ်သက်သူပါ 🙂
Comment by LIN LET KYAL SIN May 12, 2007 @ 2:55 am
ပြဿနာရှိရင် အဖြေတော့ ရှိရမှာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အဖြေရှာရင်း အချိန်တွေ၊ ဘ၀တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ အဓိကကတော့ တွန်းလှန်ဖို့ အင်အားစုတွေ မစုစည်းနိုင်တာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Comment by MyTH59 May 12, 2007 @ 5:09 pm